Dagaalka Trump iyo Ilhan Omar oo markale cirka galay + Trump oo guuldarro ku dhaw. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDagaalka Trump iyo Ilhan Omar oo markale cirka galay + Trump oo guuldarro ku dhaw.
July 18, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 3
Isku soo bixii ugu horeeyey ee Madaxweynaha dalka Maraykanku Donald Trump uu ku doonayo in dib loogu doorto mar kale sanadka 2020 ayuu dib ugu cusboonaysiiyey dagaalka dhinaca midabka oo uu ku qaaday afarta balood eek u jira aqalka Kongres-ka dalka Maraykanka.
Walle ilhaaney waan ku tagerayaa
wlshy waan kuu hanbelyaynayaa
waar waa gabadha kaqaylsiisay
fircoonki qarnigan ee trump
habeen kasta cadhuu ku seexdaa
waar waxay qabatay waxay qaban
kari waayen boqoro iyo madax isku
sheeg muslimiin ah oo markay arkan
Donald Trump madaxa foorariya.
i elect ilaahan omar.. 100 times
Ilhaan waa shan nin ka roon.Waxay qaadatay hawlo badan oo ay ahayd in ay rag qabtaan.Laakiin markii ay raggii gabeen hawla hoodii bay is xil qaantay oo ay isa soo sharaxday.wayna ku guulaysatay sharaxaadeedii.Laakiin Ilhaan may iskadayso Odayga duqaa ee intaas ka cabanaya.War Oday soo tii la xushmayn jirey ma aha?